Jun 01, 2012 04:53
၁၉၅၀ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ (၇)ရက်နေ့စွဲပါ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်-၁၄၈ ဖြင့် အပ်နှင်းထားသော အာဏာများကို သုံးစွဲလျက် နိုင်ငံခြားသုံး ငွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ (၁၇.၅.၂၀၁၂)ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ဘခ-၁/၂၉၀ (၁၈၅၃/၂၀၁၂)ဖြင့် ခွင့်ပြုချက်အရ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန် သည့် နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ပြည်တွင်းတွင် တရားဝင် ရရှိသော နိုင်ငံခြားငွေ များကို ရရှိသည့်နေ့မှစ၍ (၃)လအတွင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀/- (အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သောင်းတိတိ)အထိ သို့မဟုတ် ၎င်းနှင့်ညီမျှသော ငွေထက် မပိုသော နိုင်ငံခြားငွေ များကို လက်ဝယ်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ပြုလိုက်သည်။ (၃)လ ကျော
May 30, 2012 10:15
မြန်မာနိုင်ငံအရင်းအနှီးဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာအကူအညီပေးရန် မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဒိုင်ဝါသုတေသနအဖွဲ့၊ တိုကျိုစတော့အိတ်ချိန်းတို့အကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာ လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ၂၉-၅-၂ဝ၁၂ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပသည်။
May 17, 2012 03:14
Union Minister for Finance and Revenue U Hla Tun called for cooperation in the development of private insurance companies as Insurance Business Supervisory Board had been formed at the seminar for adopting policies for Myanma Insurance and privatization of insurance services held at Myanma Insurance Head Office on 30 April, afternoon.
He also assured that participation of private sector in insurance service would be for the good of the people.
The Union Minister inspected the Insurance Business Supervisory Board Office.
May 17, 2012 03:08
မဟာသြင်္ကန် နှစ်သစ်ကူးရုံးပိတ်ရက် ကာလအတွက် ရည်ညွှန်းနိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်း (Reference Foreign Exchange Rate) သတ်မှတ်ခြင်း
May 17, 2012 03:02
The opening ceremony of 6th SEACEN-CeMCoA/ BOJ Intermediate Course on Payment and Settlement Systems for Emerging Economies, jointly conducted by South East Asia Central Banks and Central Bank of Myanmar, was held at Sedona Hotel here this morning, with addresses by Executive Director of SEACEN Dr. A.G Karunasena and Vice-Governor of Central Bank of Myanmar U Maung Maung Win.
The one-week course is being attended by 44 trainees from 16 Asian countries.
May 16, 2012 11:26
Nay Pyi Taw, 10 April _ Myanmar delegation led by Deputy Minister for Finance and Revenue U Win Than arrived back here yesterday after participating in the meeting of ASEAN finance minister in Bali, Indonesia.
The deputy minister participated in the Finance Ministers Retreat and 15th ASEAN Finance Ministers’ Meeting in Bali on7April morning and Finance Ministers’ Retreat at Bvlgarl Resort in the afternoon.
President of Indonesia Dr. Susilo Bangbang Yudhoyono opened the 15th ASEAN Finance Ministers’ Meeting at the Westin Hotel the next day.
Apr 24, 2012 09:41
(၂၀၁၀.၂၀၁၁)ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ လုံခြုံရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးပြောကြားမည့်မိန့်ခွန်း
၁။ လေးစားအပ်တဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဌာနအကြီးအကဲများ၊ ဧည့်သည်တော်များနှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအသီးသီးမှ ဘဏ်မန်နေဂျာများအားလုံး မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံပါစေလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ယနေ့ ကျင်းပတဲ့ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်၊ ဘဏ်မန်နေဂျာများရဲ့ နှစ်ချုပ်စာရင်းပိတ်လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှာ ယခုလိုတွေ့ဆုံတင်ပြ ခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပဏာမပြောကြားလိုပါတယ်။
Prime Minister of the Union of Myanmar U Thein Sein attended opening of the new building of Central Bank of Myanmar, Nay Pyi Taw of the Ministry of Finance and Revenue at the building here this morning. The Prime Minister unveiled inscription plaque of the building.
Also present on the occasion were Nay Pyi Taw Command Commander Brig-Gen Maung Maung Aye, ministers, deputy ministers, departmental heads, staff members of the Finance and Revenue Ministry, CEC members of Myanmar Banks Association, bankers, and responsible persons.
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 1.9.2017
Auction Result for 1.9.2017
Activities of Interbank Foreign Exchange Market for 31.8.2017
Auction Result for 31.8.2017